Nifanenjehana hatrany ambony tafon-trano: tratra ireo mpivady namaky Fiangonana | NewsMada
Nifanenjehana hatrany ambony tafon-trano: tratra ireo mpivady namaky Fiangonana
Hafa kely indray! Nifanenjehana hatrany ambony tafon-trano ireo mpivady tratra nangalatra tao FJKM Ambalavao Isotry, ny alahady teo. Mody nivavaka tao amin’ity fiangonana ity izy mivady hay nangalatra tao am-piangonana nony alina ny andro…
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny PPA Ampefiloha eny Isotry, tamin’io alahady io tao am-piangonana, ireo mpivady tompon’antoka tamin’ny halatra fanamafisam-peo tao anaty fiangonana. Araka ny fanazavan’ny polisy, mody nandeha nivavaka tao amin’ny fiangonana FJKM eny Ambalavao Isotry ireto mpivady ireto, saingy nivadika halatra izany taorian’izay. Nony nirava anefa ny fotoam-pivavahana, tsy nivoaka fa nijanona tao am-piangonana izy mivady ary niafina tao ambony rihan’ilay fiangonana. Rehefa tonga ny tamin’ny 8 ora alina, nanomboka namoaka tsikelikely ny “baffle” lehibe tao am-piangonana izy ireo. Tsikaritry ny mpiambina ny fiangonana anefa izy mivady namoaka ireo fitaovam-piangonana ka niantso polisy avy hatrany izy. Tonga haingana ny polisy ka raikitra ny fifanenjehana hatrany ambony tafon-tranon’ny fiangonana. Vokany, noraisim-potsiny ireto mpivady nidiran’ny devoly ka nangalatra tao am-piangonana ireto. Niaiky ny heloka vitany izy ireo nandritra ny famotorana nataon’ny polisy. Fantatra ihany koa fa “clavier” iray, “ampli” iray ary “baffle ampli” no nokasain’izy mivady ireto hangalarina tamin’io alina io.
Tafiditra any am-piangonana ny jiolahy…
Ankoatra ny halatra sy fanendahana mahazatra ety ivelany, tafiditra hatrany am-piangonana koa ny jiolahy amin’izao fotoana izao. Ireo vehivavy mitondra poketra matetika no tena lasibatra rehefa fotoana fanaovana ny rakitra. Lasa manao rakitra, nony miverina, tsy hita eo amin’ny seza intsony ny poketra. Tsy misy iainana intsony mihitsy, eny an-dalana sy any an-trano, mitaintaina amin’ny mpanafika hatrany ary am-piangonana aza, tafiditry ny mpanao ratsy koa. Manginy fotsiny ny fihetsika mamohehitra ataon’ireo mpanompon’Andriamanitra sasany.